Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland iyo xildhibaano la socda oo booqday qoyskii Caasho Ilyaas – Kalfadhi
Gudoomiye ku xigeenka golaha wakiillada Puntland iyo xildhibaano la socda oo booqday qoyskii Caasho Ilyaas
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiillada Puntland Avv. Cabdicasiis Cabdullahi Cismaan iyo wefdi xildhibaano ah oo uu hogaaminayo ayaa shalay gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.
Ujeedada safarka ayaa daaranayd in ay booqdaan isla markaasna u tacsiyeeyaan qoyska Caasho Ilyaas Aadan oo 12 jir ahayd, gabadhaas oo toddobaadkii hore lagu kufsaday deedna lagu dilay Gaalkacyo.
Docda kale, gudoomiye ku xigeenka iyo xildhibaanada la socda ayaa indha-indhayn doona hannaanka loo wado abaabulka iyo u diyaar-garowga dhismaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo qorshuhu yahay in ay doorashadeedu dhacdo 25ka bishan.
Golaha wakiillada Puntland ayaa fasax ku kala maqan, waxayna shaqada dib ugu soo noqon doonaan 20ka bisha si ay uga shaqeeyaan miisaaniyadda dowladda ee sanadkan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo Midowga Baarlamaannada Carabta uga warramay Xogta BFS